Itoobiya iyo Eriteriya oo ku heshiiyay darbiga labada dal inay ku badalaan buundo xiriirisa – Radio Daljir
Luulyo 9, 2018 6:34 b 0
Ethiopia iyo Eriteria ayaa isku raacay inay soo celiyaan xiriirka labada, kadib kulan kadhacay magaalada Asmara ee dalka Eriteriya oo labada dal ay ku heshiiyeen in lasoo afjaro khilaafka ka dhaxeeya, lana soo celiyo xiriirka diblumaasiyadeed ee labada wadan.
Go’aankan ayaa lagu dhawaaqay kadib dabaylo isbadal ah oo uu wado raysal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, kaasi oo kulan fool ka fool ah ay ku yeesheen magaalada Asmara ee xarunta dalka Eriteriya madaxwayne Isias Afawerki.
“Waxaan isku raacnay in duulimaadyada labada dal ka howlgalayay la isu furo, dekedaha la wada isticmaalo, shacabkuna ay labada dal isaga gudbaan, iyadoo safaaradaha labada dal si degdeg ah loo furi doono” ayuu yiri Abey oo kulan casho ah ka hadlayay.
“Waxaynu burburinaynaa darbiga, inaguu ugu badalayna dadka buundo isku xirta labada dal oo shacabka is jecel xiriirisa ” ayuu hadalkiisa ku daray Abiy.
Dowladahan ku yaala Geeska Afrika colaad u dhaxaysay inka badan labaatan sano waxaa ku geeriyooday sideetan kun oo qof.
Saraakiil loo xiray weerarkii Muqdisho